Home AFRIKA CARUURTA FOOTBALL Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Nigeria Kelechi Iheanacho Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawirka
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Full of star star oo si fiican loo yaqaan 'Nickname'; 'Kel'. Sheekadayada Kalechi Iheanacho ee Carruurta iyo Wargelinta Qaadista Joogtada ah waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga.
Mar kasta oo magaca Kelechi Iheanacho lagu sheego goobaha kubadda cagta, waxa dadku muuqdaan waa qof nasiib u leh in uu naftiisa ka helo hoolka kubada cagta ee da 'yar oo da' yar. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, u ogolow.
Kelechi Iheanacho Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawirka -Nolosha Carruurnimada Hore
Kelechi Ihenacho wuxuu ku dhashay 3 Oktoobar 1996 oo ku taal magaalada Obogwe ee gobolka Imo, Nigeria by Elder James Ihenacho (Aabaha) iyo Late Mercy Ihenacho (hooyo). Waxa uu ahaa wiilkii ugu dambeeyey iyo cunugii saddexaad oo ka mid ah qoys reer 4 (Waalidku waxay dhashay dhalashada 3 Wiilasha iyo Gabdhaha).
Bilowgii, Kelechi waxay cayaartay kubadda cagta maalin kasta iyada oo laba walaalo ah iyo saaxiibo wadada iyo iskuulkiisa. Kubada cagta oo dhan wuxuu waligiis doonayay inuu sameeyo sidii caruur. Walaalihiisii ​​weynaa ayaa sidoo kale ciyaaray kubada cagta, aad ayayna u fiicnaayeen, laakiin ma aysan aheyn go'aan sida walaalahooda yar yar. Waqtiga qaarkood, waxay ku siiyeen isaga oo leh gargaar kasta oo uu u baahan yahay ka dib markii indho-indheynta uu ahaa qofkii xajistay. Iheanacho ma ahayn kaliya caqli ahaan sida ciyaaryahan yar. Waxa uu sidoo kale ka mid ahaa saddexda ugu sareeya ee ardayga fasalka uu dhigto intii uu ku sugnaa Dugsiga Hoose iyo Dugsiga Hoose. Marka hore, waxqabadka akadeemiyadeed wuxuu ahaa wax uu waalidku jecel yahay wax ka badan xaqiiqda ah inuu si fiican u ciyaaro kubada cagta.
Kelechi Iheanacho Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Hadafkoo Doonta Inay Daawadaan Ciyaaraha Barclays Premier League
Qoyskiisa waxaad heysataa TV, laakiin ma aadi kartid ciyaaraha Premier League marka uu ahaa mid aad u yar. Tani waa dhibaatada guud ee Nigeria. Habka kaliya ee lagu arki karo ciyaaraha ayaa ah inay bixiso sumadaha 20 xarumaha daawashada kubbadda cagta ee dhex mara dalka.
Kelechi awoodi kari waayeen marwalba. Mararka qaarkood, waa la ceyrin lahaa haddii uusan awoodin in uu iska bixiyo lacagta loo baahan yahay si loo daawado ciyaarahaas. Kadibna, waxa uu ahaa taageere Chelsea ah. Sida Kelechi Ihenacho u dhigo, "Waa inaan ka codsanaa inuu daawado ilmo ahaan marka loo eego ilma yar sababtoo ah mar uun, ma awoodi karno lacagta N50 (qalinka 20) ee albaabka u dhow guriga. Marka munaasabaddan oo kale, waxaan mararka qaarkood ku dhejin lahaa xarumaha daaweynta ama ka codso si aan u helo si aan u aragno ficilka. Ma jirin habka waalidkuna u awoodi lahaa inuu iibsado DSTV, taas oo muujinaysa Premier League"- Waxa uu shaaca ka qaaday.
A MACLUUMAADKA EE DADKA KA DHAMAYSO HIMEEN HADDII AAD U LAHAYN LAHAYN ISKU DARAYSO FOOTBALL-"Wax yar ma ay ogeyn inuu noqon doono mid ka mid ah inay daawadaan shaashadda dhawr sano ka dib"
Kelechi Iheanacho Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Howl-galka ayaa ka baxa saboolnimada
Kelechi Ihenacho wuxuu u baahday inuu ka soo baxo faqriga wuxuuna heley kubada cagta sida xulashada kaliya ee u horseedi karta inuu weynaado. Kaliya wuxuu rajeynayaa hal shay. Ku qancinta waalidkiis, (gaar ahaan aabihiis) in ay aqbalaan oo ay kafaala-qaadaan riyadiisa ayna ka baxaan xaqiiqda ah 'Horta waxbarashadu waxay ahayd furaha kaliya ee guusha'.
Nasiib daro si fiican uma fiicnayn maadaama ay isku khilaafsan yihiin. Waqtiga qaar, wuxuu u istaagay sida uu yahay madaxa guriga wuxuuna uga digay wiilkiisa ugu dambeeya inuu marnaba keenin wax kubada cagta ah ee gurigiisa. Waxa uu ku booriyay isaga inuu wax barto oo kaliya. Dhawr jeer, waalidiintiisa ayaa ku dhaleeceeynaya inuu ciyaaro kubadda cagta habeenkii halkii uu ka akhrin lahaa buugaagtiisa oo uu qabanayo shaqadiisa.
Sida laga soo xigtay Kelechi, ..."Labadayda aabbahay iyo hooyaday ma dooneynin inaan kubad ciyaaro waqti buuxa. Waxay iiga sheekeeyeen fursadaha ay u sameyn lahaayeen in ay weynaadaan, waxayna noqon laheyd waqti qashin ah haddii ay noqoto in ay noqoto mid aan macquul aheyn sida uu u sameeyo dhalinyaro badan oo reer Nigeria ah. Waxay rabeen inaan diirada saaro waxbarashada kaliya oo aan helo waxbarasho wanaagsan. Sidaa darted, waqti ayaan haystay oo aan ku ciyaaro kubada cagta oo kaliya ayaa ka ciyaari kara dugsiga. Mararka qaarkood waxaan aadi lahaa meel ka fog guriga si ay kubada cagta u ciyaaraan habeenkii si aysan i arkin. Mucjisku wuxuu ku dhacay maalintii aamminsan. Aabahey ayaa is beddelay markii uu macallin dugsigeyga u yimid gurigeyga si aan ugu sheego inaan loo xushay inuu matalo kooxda dugsiga tartan dawladeed. Waxa uu ansixiyay inaan tago dugsiga. Taasi waxay ahayd fursadda kaliya ee ugu dambeysay ee aan ka heli doono isaga si aan u caddeeyo nafsadeyda inaan kubad ka dhigi karo. Waxaan ciyaaray tartanka sida noloshaydu ku xiran tahay '.
Kooxda Kelechi Ihenacho ayaa ku guuleysatay tartanka gobalka, waxaana uu noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee kubadda cagta ee gobolka. Taasi waxay ka dhigtay aabihiis oo aad u faan badan oo u calaamadiyey barta isbedelka ah ee bilawga fiican ee xirfaddiisa.
Kelechi Iheanacho Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Socda Weyn
Kelechi Ihenacho aabihiis ayaa aqbalay go'aankiisa ahaa in uu kubada cagta raaco isla markaana uu bilaabay inuu taageero sida ugu dhakhsaha badan uu ogaaday in wiilkiisa uu ku guuleystay abaalmarinta kubadda dahabka ah, biladaha iyo dhowr dhiirigelin oo ka socda guddoomiyaha gobolka. Abaalmarintan waxaa loo dhiibay macalinka isboortiga ee dugsiga sida sawirka lagu arkay. Waa abaalmarin loogu talagalay inay noqoto xiddigaha tartanka tartanka dugsiyada tartanka dugsiyada ka dib markii shaqo aad u adag.
Marka uu ku qanacsan yahay oo uu arkayo inuu noloshiisa ku bilaabi lahaa kubada cagta. Elder James Ihenacho (Aabihiis) ayaa si dhakhso ah ugu diiwaangashan wiilkiisa akadeemiga kubada cagta ee ugu wanaagsan gobolka. Ma qaadan waqti dheer ka hor inta uusan wiilkiisa ka diiwaangashanayn Laanta dawladda Lagos ee kubada cagta Taeye ee Owere, oo ah magaalada caasimadda ah ee Imo state, bariga Nigeria.
Waqtigaan waxa uu ahaa wax walba oo ku saabsan tartanka kubadda cagta ee lagu qabtay caasimadda Nigeria, Abuja. Kelechi oo u ciyaaray gobolka Imo ayaa loo yaqaanay inuu yahay kabtankooda.
Wuxuu kooxda u horseeday guulo dhowr ah tartamada qaran. Waxa uu helay aqoonsi qaran markii uu si madaxbanaan u hogaamiyay kooxdiisii ​​gobolka si uu ugu guuleysto tartan weyn oo dhalinyaro dhalinyaro ah oo ka dhacda magaalada Abuja ee dalka Nigeria. Tan iyo markaas, dhammaan dadkii goobjoogayaasha ahaa waxay bilaabeen inay indhaha ku hayaan ilbiriqsigooda. Mar labaad, ma qaadan waqti dheer ka hor inta uusan u dooran inuu matalo Nigeria heerkeeda U14. Horumarka la sii waday wuxuu ku arkay horumarka Heerka U17 halkaas oo uu ku fashilmay tayadiisa tayadiisa adduunka.
Kelechi Iheanacho Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Meelaha Bambada Bari
Koobkiisii ​​ugu horeeyay ee caalami ah wuxuu ahaa 2013 Africa African U-17 Championship ee Morocco, halkaas oo uu ku dhuftay seddexleey uu ka dhaliyay Botswana. Wuxuu goolalkiisa u huray 2013 African U-17 African ee Morocco isaga hooyadiis, oo laba bilood ka hor tartanka u geeriyooday.
Kelechi Ihenacho ayaa noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa kubada cagta adduunka ka dib markii loo codeeyay abaalmarinta Ballon d'Or ee Adidas Golden Ball oo ku guuleystay Koobka Adduunka ee FIFA 2013 World Cup.
Ciyaartoydiisa ayaa u horseeday inay xiiso u yeeshaan kooxo ka dhisan Yurub; Kooxihii raacay horumarkiisa waxaa ka mid ah Arsenal, Manchester City, Sporting Clube Portugal iyo Porto. Xiriirka Kubadda Cagta Afrika (CAF) wuxuu ku magacaabay Tartanka ugu Ballan-qaadka ee Sanadka ee 2013 ee Abaalmarinta CAF.
Waxa uu ku dhowaa inuu tago kooxda reer Portugal ee Porto ilaa uu aabihii James uu u sheegay inuu mustaqbal fiican ku yeelan doono garoonka Etihad Stadium.
Isaga oo u adeegsanaya, "Waxaan ciyaaray kulamo dhowr ah oo ka dhacay finalka Koobka Adduunka ee 17, waana markii aan heshiis la gaaray City. Dhamaan daacadnimada, ma aanan ogeyn wax badan oo kooxda ku saabsan waqtigaas. Waxaan ku dhawaa inaan u saxiixo FC Porto halka aan runtii doonayay inaan tago. Ma aanan aamisanahay inaan mustaqbal ku leeyahay Manchester City. Laakiin aabbahay baa rumaystay oo i siiyey kalsoonida aan u baahnahay. Waan ku faraxsanahay talada waan qaatay. "
Wuxuu ku daray: "Markii ugu horeysay ayaan maqlay inaan xiiseynayo City markii aan la joogay Nigeria sababtoo ah waxaan u ciyaareynaa isreebreebka Koobka adduunka ee 17," ayuu yiri. "Markii aan dhameystirnay habka isreebreebka, waxaan helay dhowr ciyaaryahan oo ii soo dhoweynayay, waxaana iigu sheegi jiray inaan kooxo yar oo xiiseynaya saxiixyadayda. Aad ayaan u faraxsanaa waxaanan jeclaan lahaa inaan u saxiixo dhammaantood. Xaqiiqdii waan ku riyaaqay kubadeyda kubada cagta waqtigaas. "
Waxa ay aheyd Manchester City oo qandaraas kula jirtay saxiixa markii uu ku soo laabtay maalintiisii ​​18th. Taageerayaasha kubada cagta ee Taeye Football Academy ee Nigeria, ayaa aabihiis waxaa la siiyay lacag xNUMX ah (300,000 Million Nigerian Naira) wiilkiisa wuxuu u balanqaaday inuu soo jiitay kooxo taajir ah.
Kelechi Iheanacho Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Nolosha Qoyska
Kelechi Ihenacho waxay ka timaaddaa bariga Nigeria, oo ah gobol ay hareereeyaan qabiilka Igbo. Aabihiis, Elder James Ihenacho waa ganacsade oo markii hore ku iibsaday qalabka dhismaha ee Owere, magaalada caasimadda ah ee magaalada Imo. Waxa uu haatan yahay wakiilka wiilkiisa iyo maamulkiisa.
Waa qofkii mar hore aaminsanaa waxbarashada, mar walbana wuxuu rabay carruurtiisa ka hor intaanay ku biirin dhinaca ganacsiga.
Ka hor inta uusan wiilkiisa ku fiicneyn kubada cagta, Elder James wuxuu u shaqeynayay qoys hoose dhexe. Maanta, wuxuu hodan yahay, haatanna wuxuu ka mid yahay muwaadiniinta heerka koowaad ee dalka oo dhan, taas oo Ilaah ugu mahad celineysa kubada cagta si uu u badbaadiyo qoyskiisa. Waxa uu yahay go'aanka ugu sarreeya marka uu yimaado maamulkiisa wiilkiisa oo uu qaabeynayo waddada wiilkiisa. Ihenacho ayaa go'aansaday inuu ku biiro kooxda Leicester City isagoo aan heshiis amaah ah u ahaa go'aan uu ka dhigay aabihiis.
In uu erayada ..."Waxa uu sii joogi doonaa Manchester City sida uu dhigayo Pep. Waxaan u sheegay inuusan ku raacsaneyn qorshe kasta oo ay sameyn doonaan si uu amaah ugu diro. Tani ma ahayn wax aan ku raacay markii ay saxiixeen wiilkayga. Midkoodna wuxuu ku tartamayaa weeraryahanada kubada cagta sida Aguero kooxda ama waxay u iibiyaan koox kale. " Oday James Iheanacho ayaa wareysi uu siiyay AfricanFootball ka hor intaanu wiilkiisa u wareegin Leicester.
Dhibaatooyin badan ayaa lagu yaqaanaa aabihiis, laakiin wax yar oo hooyadiis ah. Tani waa sababta oo ah waxay tahay Late. Mrs Mercy Ihenacho (hooyada Kelechi Ihenacho) ayaa ku dhintay kadib xanuun muddo kooban ah markii wiilkeedu ahaa 14 sano jir. Dhimashada hooyada 43 ee hooyada 4 waxay naxdin weyn u ahayd qoyskeeda markii uu warku burburay.
"Waa maxay sababta aan?" Kelechi ayaa sii deysay kadib markii macalinka kooxda, Manu Garba (MFR) oo ka tirsan shirkado kale oo madax ah, iyaga oo warka u gudbiyay isaga. Waa maxay sababtu? Waa maxay sababta aan ahay? Hada imika? .. Hooyaday wax badan ayey inoogu sameysey si gaar ah aniga oo aad iyo aad ayaan u murugeysanahay taas oo ku saabsan arrintan. Waxaan la hadlay asbuucii la soo dhaafay Axadii waxaanan ku faraxsanahay in ay wanaagsanayd, fadlan ha ii sheegin in ay dhimatay! " wuu qaylinayaa. Kelechi Iheanacho ayaa ku tilmaamay dhimashada hooyadiis inay tahay guuldaro wayn. Wuxuu goolalkiisa u huray 2013 African U-17 African ee Morocco isaga hooyadiis, oo laba bilood ka hor tartanka u geeriyooday.
Kelechi Iheanacho Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Nolosha Xiriirka
Kubad sameeyaha ugu mushaarka badan Nigeria ayaa waxaa laga saarey gabdhaha. Shaki la'aan, Kelechi Ihenacho waxay jeclaan lahayd in ay la guurto gabadhan oo u mataleysa shakhsiyadda adduunka ee ganacsiga. Wuxuu xiriir la leeyahay laakiin weli waa in uu aqoonsado gabadhiisa ama gabdhihiisa.
Kelechi Iheanacho Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Fursadaha Jacaylka
Xaqiiqdu waxay tahay in qofkasta oo Nigerian ah uu isweydaarsado waxa ay u badan tahay inuu ku dhaco qaybta shakhsiyaadka caanka ah ee bulshada. Halkan waa afarta qaybood ee gabdhaha ee Iheanacho laga yaabo in ay taariikhda dhici karto;
1. Aabe: Sida weeraryahanka Super Eagles Ike Uche iyo Nollywood actress Uche Jombo oo taariikhda la yiraahdo, wiil yar yar ayaa laga yaabaa in uu miisaamiyo fursadaha uu ku galo shabakadiisa badda badda ee Nigerian ee haweenka, gaar ahaan xilligaas oo caan ah ay ka muuqato xiiso u dhaxeyso midba midka kale.
2. Gabar bilyaneer ah: Guul. waxay yiraahdaan, waalidiin badan, waa sababta uu qof kastaa u jeclaan lahaa inuu la wadaajiyo. Sidaa darteed haddii uu ku fikirayo guurka, gabadha hodanka ah waa mid ka mid ah fursadaha ugu sarreeya ee maskaxda ku haya. Tani waa kiiska Mikel Obi iyo Olga Diyachenko.
Mikel Obi ayaa la kulmay Olga Diyachenko, gabadha reer Ruushka ah iyo Iheanacho ayaa laga yaabaa inay eegto habka Dj Cuppy, Femi Otedola gabadhiisa.
3. Quruxda qurxinta: Iheanacho ayaa sidoo kale raaci karta hogaamiyaha kabtankii hore ee Super Eagles Joseph Yobo kaasoo farta ku fiiqay fannaanka hore ee Miss Nigeria Adaeze Yobo, labadaba labadoodaba tan iyo waagaasba. Gabdhaha quruxda badan ee Nigeria ayaa marnaba ma dhihi doono ciyaaryahan Iheancho ah ee kubada cagta adduunka.
4. Hooyo dhashay: Ma aha in ciyaartoy badani ay jeclaan lahaayeen fikradda ah in ay is guursan karaan, laakiin waxay ku fiicnaan laheyd suurtogalnimada inay haysato hooyo yar oo u sameyn doonta wax walba oo ay ku qaadaan ilmahooda. Mario Balotelli walaasheed waxay iskulafureen weeraryahanka Super Eagles Obafemi Martins waxayna wada dhaleen cunug. Iheanacho wuxuu u maleyn karaa inaysan jirin wax dambi ah oo kudhaafida walaashiis kubadsameeyaha ah qaab qoys.
Kelechi Iheanacho Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Diiwaanka Qoritaanka Goolka
Iyadoo 14 ay 35 ku ciyaartay 2015 xilli ciyaareedkiisii ​​ugu dambeeyey ee England, Iheanacho ayaa ku dhameystay 16 / 93.9 iyadoo goolasha ugu fiican ee daqiiqad kasta uu ku jiro ciyaaryahan kasta oo Premier League ah, goolal udhaliya daqiiqad kasta XNUMX.
Kelechi Iheanacho Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan -Dareenka uu hayo
Iheanacho ayaa ku soo xigta Nwankwo Kanu ee Premier League. Waxa uu haatan yahay waxyaabaha ugu weyn kubadda cagta ee magaalada Owerri - magaalada koonfureed ee Nigerian. Guri ka mid ah weeraryahankii hore ee Premier League Nwankwo Kanu.
Iheanacho waxa uu rajeynayaa in xirfaddiisa ay u dhaqmi karto waxyaabo ay u muujinayaan dadka iyagu isku dayaya in ay isku mid noqdaan bilaabashada mugdiga ah ee uu ku soo koray.
Kelechi Iheanacho Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan - Nolosha Hore ee Man City
Iheanacho ayaa ku biiray Akadeemiyada Manchester City ee 10 January 2014. Ka hor inta uusan 2014-15 xilli ciyaareedka, City booqday Mareykanka oo booqasho ku mareysay xilli-ciyaareedkii hore, inkastoo aysan weli si rasmi ah uheli City ciyaaryahan, wuxuu ku biiray kooxda. Waxa uu ciyaaray oo dhaliyay goolkii ugu horeeyay ee safarka, 4-1 wuxuu ka horyimid Sporting Kansas City, waxaana uu mar kale gool ka dhaliyay Milan xili ciyaareedkii 5-1. Kadib dhamaadkii booqashada, Manchester City waxay u diyaarisay Iheanacho inay qayb ka noqoto kooxda koowaad.
Isku-joogga iyo dareenka ugaarsiga dookhiisa ayaa ku qasbay inuu dalbado funaankii ugu horreeyay ee kooxda ka hor ciyaartoyda khadka dhexe ee sida Samir Nasri oo dhaawacyo xun soo gaaray xilli ciyaareedkaan. Dhab ahaantii, dad badan ayaa aaminsanaa in sida Edin Dzeko loo iibiyay habab aad u wanaagsan oo loogu talagalay taliyeyaasha dhalinyarada ah sida isaga oo fursad u helaya mustaqbalka.
Iheanacho's markii ugu horeysay ee uu ka dhaliyo sadexda gool ee uu ka dhaliyo Emirates FA Cup ee Aston Villa bishii January ee soo socota, taasoo keentay in Manuel Pellegrini uu heeso "Aad, aad u tayo badan" Weeraryahanka ayaa amaanay waqti buuxa. Guushii uu ka gaaray Manchester City waxay u horseedday Leicester booska joogtada ah iyo lambarka funaanada ee kooxda.
Kelechi Iheanacho Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan - Abaalmarinada Saaxiibka Ah Ee Dhiirrigeliya
Tan iyo markii uu ku biiray Manchester City oo loo yaqaanay in uu ka badan yahay 40 million Nigerian Naira mushaharkiisa todobaadkii, hal shay ayaa hubaal ka dhigaya xiddiga Nigerian; 'Waa inuu bixiyaa qarashka dadka u dhashay isaga oo dib ugu soo celiyay waddankoodii'.
Kelechi waxay dhab ahaantii bixisay lacagtiisa. Wuxu ku xiraa guryaha la dhisi doono ee Lagos si loogu abaalmariyo asxaabtooda taageerada iyo saaxiibtinimada isaga oo aan waxba ahayn.
Sawirka hoose wuxuu muujinayaa saaxiibadiisa ugu fiican ee Nigeria oo booqasho ku tagaya guriga Imo. Halkan, waxay la kulmeen Guddoomiyaha Gobolka Imo, Nigeria, Owelle Rochas Anayo Okorocha.
Qeybta weyn ee kubada cagta ee Kel, saaxiibadiisa ayaa si wacan u soo wacaya isaga oo ka soo jeeda beelaha heysata horyaalka Premier League ayaa sii wadaya inay rajo ka muujiyaan dhalinyarada ku dhibaateysan kubada cagta Afrika. Sida laga soo xigtay Kelechi, ...
'Waxaan qabaa in caruur badan oo guriga dib loo soo celiyay ay igu dhiirigeliyeen waxa igu dhacay iyo meesha aan maanta joogo. Ma rumaysan karaan waxa aan ku guuleystay kaliya 19 da 'sano waxayna u sii dheer tahay inay aaminto inay sidoo kale sameyn karaan.'
"Waxaan rajeynayaa inaan tusi karo inay wax walba sameyn karaan. Mar kasta oo aan dib ugu laabto dalka Nigeria, had iyo jeer waxaan ku soo qaataa boorso buuxda oo ah maaliyada Manchester City ee caruurta. Haddaad tagto Owerri hadda, waxaad arki doontaa in badan oo carruur ah oo ku ciyaaraya wadooyinka, xiran buluug. Nigeria ayaa leh taageerayaal badan oo Premier League ah, waxaana ay doonayaan inay mar walba ku laabtaan gurigooda. "
Sheeko xariir ah oo sheeko xariir ah oo sheeko xariir ah